DIY ရေစိုခံ PE Foam ထိုးထားသောအုတ်ခဲကျောက်တုံးသုံးခု - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
DIY ရေစိုခံ PE Foam ဖြင့်အုတ်ခဲကျောက်ခေတ် 3D နောက်ခံပုံများ
$10.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $13.99
အရွယ် 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm
အရောင် E C F D B A G
ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X ကို 0.8cm / E ကို တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / E ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / C တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / C အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / F ကို တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / F ကို ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X ကို 0.8cm / D ကို တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / D ကို ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X ကို 0.8cm / B တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / B က ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X 0.8cm / A တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / A ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X ကို 0.8cm / G တရုတ် / 60 X ကို 30 X ကို 0.8cm / G
DIY ရေစိုခံအမြှုပ်ထိုးထားသောအုတ်ကျောက် 3D နောက်ခံပုံများ - ယူနိုက်တက်စတိတ် / 60 X 30 X 0.8cm / E backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဆင်ဆာ Code ကို: 3D နောက်ခံပုံများ
အရည်အသွေးမြင့်မားသော Living ည့်ခန်းအတွက် PVC နောက်ခံပုံများ
သည်သင့်လျော်သော: အိမ်အလှဆင်၊ Living ည့်ခန်း၊ ကလေးများ၊ အိပ်ခန်း
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး: မူလစာမျက်နှာ Decoration ဆက်စပ်ပစ္စည်း
အမည်: Wရေရှည် PE မြှုပ် 3D နောက်ခံပုံများ
အရွယ်အစား: 60 X 30 X 0.8cm
အရောင်: အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ Khaki၊ Sky Blue၊ ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊
အမျိုးအစား: Self-adhesive ရေစိုခံနောက်ခံပုံ
သုံးဖက်မြင်အလှဆင်ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်များ၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သောကလေးများ၊ သင့်မိသားစုကိုလုံခြုံအောင်ဂရုစိုက်ပါ
ပုံစံ၊ သဘာဝအုတ်ပုံစံအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ရိုးရှင်းပြီးခေတ်မီသောပုံစံ
အခမဲ့ DIY၊ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ - မျက်နှာပြင်ကိုသစ်သားမျက်နှာပြင်၊ ဖန်မျက်နှာပြင်၊ ဖုန်မှုန့်နံရံများကပ်ခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းအောင်ကပ်ပါ၊ နံရံ၏အောက်ခြေနှင့်အခြားအရာများစသည်။
1PC PE ရေမြှုပ် 3D နောက်ခံပုံနံရံကပ်စတစ်ကာများ DIY နံရံအလှဆင်နံရံအလှဆင်ဖောင်းကြွအုတ်ကျောက်။
класссные!3ရက်မှစတင်ကာкурьерသည်။ Клеитсяхорошо, нонехватило။ Заказалаещё, жду။
WOW ထိုကဲ့သို့သောလှပသောချောအကျိုးသက်ရောက်မှု !!!! နောက်ဆုံးကြည့် LOVE LOVE နောက်ဆုံးကြည့်ပါ။ Accent နံရံအတွက်ဂရိတ်။
Egyet rendeltem kiprobalni, hogy milyen de teljes mertekben elegedett vagyok, fogok meg rendelni belole ။
10 ရက်အတွင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးခြင်း၊ ဒြပ်စင်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီထုပ်ပိုးပြီး၎င်းသည်စွဲကပ်မှုအားဆုံးရှုံးစေသည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကောင်းစွာကပ်ထားပါ၊ မှန်ကန်ပြီးလုံလောက်သောအချိုးအစားရှိသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်